High Voltage Test Equipment Manufacturers |China High Voltage Test Equipment Suppliers & Factory
GIT yakatevedzana inoshandiswa zvakanyanya kune yakakwira voltage, hombe yeGIS midziyo yemagetsi insulated inomira voltage test, partial discharge test uye GIS transformer accuracy bvunzo, inokodzera GIS substation, GIS magetsi ekugadzira michina, basin mhando yemagetsi insulator mugadziri.
Inoshandiswa zvakanyanya mukugadzira magetsi, madhipatimendi ekushanda kwemagetsi, masangano ekutsvagisa nemayunivhesiti.
GDYT-350kVA/70kV PD yemahara Resonant Test System inoumbwa nePD yemahara variable frequency magetsi, HV yekuyeresa bhokisi, excitation transformer, isolation transformer, Resonant reactor, uye capacitive voltage divider.
Withstand voltage test ndiyo yakakosha yekudzivirira bvunzo yemagetsi emidziyo.Yakakamurwa kuita zvikamu zviviri: AC uye DC inomira voltage bvunzo.
GDZG-300 yakatevedzana yeDC high voltage tester iri kuyedza DC yakakwira voltage ye zinc oxide lighting arrester, magnetic blowing arrester, tambo dzemagetsi, jenareta, transformers, switch, uye zvimwe midziyo, iyo inokodzera magetsi emagetsi bazi, simba redhipatimendi remafekitari, sainzi tsvakurudzo zvikamu, njanji, makemikari indasitiri, magetsi zvidyarwa.
GDZG-S nhepfenyuro midziyo yekuyedza DC voltage uye DC inodonha ikozvino yemvura-yakatonhorera jenareta mumamiriro emvura kuburikidza, iyo inokunda zvachose matambudziko enguva refu yekuvhuvhuta mvura, pasi pemvura yakaoma kuoma, nyore kukonzera arcing mukati mecoil. .Mudziyo wacho wakareruka, wakareruka waya, uye ari nyore kuverenga.Polarization compensation voltage inobuda zvakananga nekesi.
AC DC Yakakwira Voltage Divider
GDFR-C1 yakatevedzana AC/DC dhijitari mita iri pa-saiti chiridzwa, icho chinoedza zvese AC uye DC voltage.Iyo ine voltage divider uye kuyerwa chiridzwa.